Ku dhiirigelinta gvSIG - Abaalmarinta Europa Challenge - Geofumadas
dhiirigelin qaali ah oo gvSIG - Challenge Award Yurub
Luulyo, 2015 GvSIG, tabo cusub
Way fiican tahay in la ogaado in gvSIG uu helay abaalmarin caalami ah intii lagu jiray tartankii Europa Challenge.
Abaalmarintan waxay bixisaa fursado mashaariicda ka qaybqaata hal-abuurka iyo xalalka waara ee bulshada caalamka. Dabcan, haddii ay ku daraan qiime dheeraad ah INSPIRE initiative waxayna isticmaalaan tiknoolajiyada laga helo NASA World Wind.
Dunida adduunka ah jirey dhowr sano ka hor oo ah midka kaliya ee la midka ah, Google Earth iyo faa'iidooyinka sida dhinacyada kala duwan sida OGC adeegga iyo farsamooyinka ay caan ku yihiin caanka ah ee Google oo keliya ayaa ku jiray qaybta lacagta lagu bixiyo. Waxa keliya oo suurtagal ah in lagu rakibo Windows, inkastoo ay jiraan version for Linux; Ugu dambeyntiina wuxuu udhaqaaqay Roobka Aduunka wuxuu qaatay SDK si ay u isticmaalaan bulshada sameeysa in laamaha kala duwan hadda, sida Geoforge Project, Dapple, SERVIR-VIZ, Puntland iyo WW2D lagu hayo.
Sida niyad ah in ay sii wado, in sannadihii ugu danbeeyay loo Waxyoodo ahayn NASA ku dhaqan ee macnaha guud ee Challenge Award Yurub, taas oo maanta waxaan ku faraxsanahay in la beegsaday oo ku guuleystay software ah GIS curdinka ah ee ilaa hadda Hispanic deegaanka ugu baahsan.
GvSIG ayaa ku guuleystay abaalmarintan
Ururka GvSIG wuxuu ku faraxsan yahay in uu sharaxaad ka bixiyo sinjiga, isagoo soo bandhigay isticmaalka ay siiyeen SDK ee NASA World Wind, waxayna soo bandhigeen FOSS4G Europe horumariyo usbuucii hore ee Talyaaniga.
Abaalmarinta waa in la siiyo dhiirrigelin xiiso leh in gvSIG, kaas oo muddo dhowr sano ah ayaa ku hadhay la arki karo iyo qayb sii kordhaysa ee shirka free, gaarey ka baxsan deegaanka ay cudurku. macnaha guud ka American ah Latin, halkaas oo gvSIG ayaa helay Misbaax xiiso reebo, soo jiidan doonaan dareenka in deegaanno kale sida bulshada Ruush iyo Talyaaniga in ay u ilaaliyaan hawlaha la taaban karo.
Warka warkaan marwalba wuu joogaa, hase yeeshee, warka wanaagsani mar walba kuma darin.
Waxaan ku faraxsanahay inaan saadaalino in warkan uu hubaalku ku dari doono, ugu badnaan sababtoo ah waxay imaaneysaa laba bilood ka dib markii aan soo dhaweynay jookarka in Jorge Sanz uu ka tagay Prodevelp. Waxaan si fiican u ogahay in dadku ganacsi substitutable, laakiin waxaan sidoo kale ku qanciyay of baahida loo qabo in la sameeyo marka ay kaalin wanaagsan bulshada ku lug leh, gaar ahaan haddii caqabadaha cusub tusinayaan xayiraad in hore ay ahaayeen ku dhowaad hiwaayad ah waswaaska. Waxba lagama sheegi habka hoos ka Xurxo ka dhinacan wuxuu ahaa, laakiin markaas waxaan u ilaaliyaan ixtiraamka ay xirfad iyo xamaasad iskaashiga, Willy qirsan, waxaan isaga ka maqnaan doona. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa inaad si firfircoon uga sii wadi karto waxaad ogtahay sida aad u samayn lahayd iyo inaad ku qeexi karto oo keliya: ku darso xiisaha ugu habboon.
Gebogebadii hordhaca ah, abaalmarinta Challenge Yurub waa in la siiyo aragti in gvSIG in hubaal hadda leedahay caqabado xoog leh in ay raadsadaan hay'adaha dhaqaale dheeraad ah sameyn kara waxa sameeya bulshada laftiisa oo u baahan hogaamiyay aragtida, gaar ahaan dalalka soo koraya, in ka badan tababarka iyo hirgelinta waayo, haatan hore u yihiin ku filan oo sii kordhaya.
Aragtida iyo rabitaanka
No dheer walaac sida gvSIG aragti on isbeddellada Google gaadhay bannaanka ah oo ugu wanaagsan inta lagu guda jiro sano ee 2009 iyo 2011, laakiin saddexdii sano ee la soo dhaafay ayaa hoos u dhac. Tani waa in ay ka muuqataa tirada downloads software, hawlaha bulshada oo sidaas daraaddeed horumarinta; Waxaan ula jeedaa labada maalgashiga rasmi ah ka Academy ama kaalmada sida code samaynaya kaamka ka qolalka qiiq iyo biirka ka buuxsamay.
Dhinaceena waxaan aaminsanahay in gvSIG ay sii wadi doonto degenaansho xasiloonida bulshada oo jecel Java iyo code-ka bilaashka ah. Inkastoo maaraynta khayraadka dhaqaale, isbahaysiga iyo kobcinta horumarinta farsamooyinka ay soo jeedinayaan saboolnimada oo kori karta muuqaalka jawiga Anglo-Saxon waxay noqon doontaa caqabad adag. Gaar ahaan heerkii ugu dambeeyay ee isticmaala internetka ee ra'yiga dadka kale.
Caymiska ma aha qof sahlan dambeeya statistics, laakiin taasi waa benchmarking, intee ka badan in xaallada il furan. Saamaynta aan lahayn khayraadka dhaqaale isla 5 sano ka hor, laga badiyay khayraadka farsamo oo qiime sare ama ka fool u dhac dhaqaalaha ee macnaha guud ee la-hawlgalayaasha istiraatiiji ah, waxaa lagu yareyn kara dhidbidda xeeladaha dareen caadi ah in u muuqdaan in ay funcionándole mashruuca walaashiis (QGIS ) in ka 2011 ayaa u suurtagashay in ay koraan in heerarka ku munaasab ahayn, sida ku cad sawirka wadajir ah oo ka mid ah laba qalab.
Marka la eego joogtaynta, ma ahan inaan sii xoojino xitaa fursad yar. Tusaale ahaan, waa in aan eegno waxa dhacaya oo mashaariic iskaashi ee Latin Lagina dallacsiiyey by laba geesoodka ah, dhinacyo badan ama qaab beddelidda lacagaha deynta ka Europe yeelan doontaa aqoonta yar ama gvSIG; Ma noqon doonto mid xun in dib loo eego waxa dhacaya fariinta aad qaadato.
Waa in aan caddaynnaa in nidaamka deegaanka ee xalalka xorta ah, tani ma aha tartan laakiin waa mid dhamaystiran. gvSIG wuxuu u taagan yahay Java iyo QGIS for C ++, labadaba multiplatform; Mashruuca GIS ee Java wuxuu had iyo jeer noqdaa mid lagama maarmaan u ah, hadba inta uu ku hayo meesha ay tahay mid khibrad leh oo ka jirta deegaannada horumarinta. Waxa kaloo iyana xiiso badan abid ka hor model OpenSource iyo horumarinta bulshada iskaashi ahaa sidii meel gaadh ah sida ay maanta tahay, kaliya fiiri dhabar jab ku qorsheyaasha dhaqanka siiyey dadaallada sida OpenStreetMap Wikipedia, WordPress, la magacaabo wax yar. Laakiin waa in aan sidoo kale in ay ogaadaan in dunida oo dhan caalimiga ah in aan maanta ku nool yihiin, kor u qalooca hoos u of wareegga nolosha ee wax soo saarka ah ayaa suuragal ah keliya iyadoo taageeraysa hab miisaaman cagaha yar oo ganacsi technology il furan waxaa taageera: Capital, hal-abuurka iyo bulshada.
Waxaan aaminsan nahay in istaraatijiyad ee YAQINSAN u SDK World Wind NASA waa tallaabo qiimo leh si looga fogaado in la maalgashado khayraadka horumarinta wax waa hore u sii jiro oo aan u baahnayn remade ka xoq. Waxaanu sidoo kale aaminsanahay in dadaallada sidan qaadan kartaa waqti dheer (hadleynaa sii socodka ah ee OSGeo habka cudurku iyo awood leh maktabadaha geek aqbalo) oo ka baxsan ayna khayraadka waxaa ah awood go'aan xiiso leh qiimo caalamka.
Ka baxsan aragtida dareenka qayb ka mid ah maqaalkan, waxaannu dooneynaa in aan gudbino falanqayn wax ku ool ah. Waxaan u hambalyeynaynaa hambalyeynteenna dhammaan dadka isticmaala gvSIG kuwaas oo taageera kobcintooda dadaal weyn. Hambalyo udirayaasha dhiirrigeliya guulahaan si ay u cusboonaysiinayaan, hubaal waxay keeni doonaan miraha muuqaalka iyo isbahaysiga cusub.
Más información: GvSIG Foundation Blog
Post Previous«Previous shahaadada Cadastral ka ah CAD / GIS iswada
Post Next Wax-u-Yahay - Is-beddelka teknolojiyada GIS - maalinta koowaad ee ESRI UCNext »